हेलिकप्टर चढेर पाथीभरा दर्शन
ताप्लेजुङबाट हिँडेर जानेहरू प्रायः फागुनदेखि कार्तिक महिनासम्म पाथीभरा मन्दिर जाने गर्छन्। तर, सिम्रिक एयरले हेलिकप्टर दर्शनयात्रा थालेपछि पुस, माघमा पनि दर्शनार्थी धमाधम पाथीभरा जान थालेका छन्।
प्रदेश नम्बर १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई ताप्लेजुङस्थित प्रसिद्ध धार्मिकस्थल पाथीभरा पुग्ने पहिल्यैदेखिको इच्छा थियो। तर, समय मिलाउन सकेका थिएनन्। केही साताअघि उनी सिम्रिक एयरको हेलिकप्टर चढेर परिवारसहित पाथीभरा मन्दिर पुगे।
भेडेटारबाट हेलिकप्टर चढेका मन्त्री कार्की पहाड र हिमालका मनोरम दृश्य हेर्दै करिब २५ मिनेटमा मन्दिरनजिकै उत्रिए। हेलिकप्टर अरू यात्री लिन उड्यो। मन्त्री कार्कीको समूहले करिब एक घण्टा मन्दिरमा पूजापाठ गरे। फोटो खिचे। हिमाल हेरे।
त्यसपछि पुनः २५ मिनेटको यात्रा भेडेटार फर्किए। ‘पाथीभरा जाने पहिलादेखिको इच्छा थियो,’ मन्त्री कार्कीले भने, ‘हिँडेर जाने समय मिलेको थिएन। हेलिकप्टरबाट चाँडै पुगेर दर्शन गर्न पाइयो। समय कम हुने र हिँड्न नसक्नेका लागि हेलिकप्टरयात्रा धेरै सजिलो हुने रहेछ।’
गोरखा डिपार्टमेन्टल स्टोरका सञ्चालक बलराम आचार्य त हरेक वर्ष पाथीभरा मन्दिर जान्छन्। यस पटक उनले पनि हेलिकप्टरबाट परिवारसहित पाथीभरा मन्दिर पुगेर दर्शन गरे। ‘हिँडेर, हेलिकप्टरबाट पटक–पटक पुगेको छु,’ उनले भने, ‘पाथीभरा जति पटक गए पनि गइरहन मन लाग्छ।’
भेडेटारका होटल व्यवसायी पद्मिनी राई, नन्दा श्रेष्ठ लगायतको समूह पनि हेलिकप्टरबाटै पाथिभरा मन्दिर पुग्यो। पहिला हिँडेर दुई दिनमा पाथीभरा पुगेकी पद्मिनीलाई यस पटक २५ मिनेटमा पुग्न पाउँदा सपनाजस्तै लाग्यो रे ! ‘हेलिकप्टरबाट रमाइला गाउँ, हरिया पहाड अनि सेताम्मे हिमाल देखिए,’ खुशी हुँदै उनले भनिन्, ‘टक्क पाथीभरा मन्दिर पुग्दा त स्वर्गौ पुगे जस्तो लाग्यो। मन्दिरमा पूजा गरेँ, हिउँमा खेलेँ। यात्रा सोचेभन्दा राम्रो भयो।’
गत पुस २० देखि २४सम्म धेरै जना सर्वसाधारणदेखि कांग्रेस नेता डा.शेखर कोइराला, सचिव सुरेश आचार्य, प्रहरी प्रमुख सर्वेन्द्र खनालका परिवार, मन्त्रीदेखि व्यवसायीसम्म हेलिकप्टर चढेर पाथिभरा पुगे। विशेष गरी पाथीभरा जाने इच्छा भए पनि व्यस्त रहने र स्वास्थ्यका कारण हिँडेर जान नसक्नेका लागि हेलिकप्टरयात्राले सहज बनाइदिएको छ।
अहिलेको मौसममा पाथीभरा दर्शनसँगै रमणीय दृश्यावलोकन गर्न पाइने भएकाले हेलिकप्टरमा जान चाहनेहरू धेरै रहेको सिम्रिक एयरका सीईएमओ योगेश सापकोटा बताउँछन्। ‘माघमा फेरि भेडेटारदेखि पाथीभरासम्म दर्शनयात्रा गराउँदै छौँ,’ उनले भने। माघ २४ देखि २६ सम्म इटहरी फेस्टिभलमा सिटी भ्यू फ्लाइट गरिनेछ।
२७ गतेदेखि पुनः भेडेटारबाट पाथीभरा हेलिकप्टरयात्रा सुरु हुने सापकोटा बताउँछन्। ‘अस्ती भेडेटार फेस्टिभलका बेला सुरुमा फन–फ्लाइट र त्यसपछि पाथीभरा फ्लाइट भयो,’ उनले भने, ‘अब इटहरी फेस्टिभलमा फन–फ्लाइटसँगै पुनः पाथीभरा फ्लाइट हुँदै छ।’
सिम्रिक एयरका बजार प्रबन्धक कमल गौतमका अनुसार पाथीभरा दर्शनका लागि पूर्वका विराटनगर, इटहरी, दमक र धरानबाट मात्र होइन काठमाडौँबाट समेत दर्शनार्थी आउने गरेका छन्। ‘भारतीयहरूले पनि यसमा रुचि देखाएका छन्,’ उनले भने।
प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कार्की पाथीभरामा भारतीय धार्मिक पर्यटक पनि आउन चाहने भएकाले हेलिकप्टरबाट पाथीभरा दर्शन गर्न उनीहरू आकर्षित हुन सक्ने बताउँछन्। यसले प्रदेशको पर्यटन विकासमा सहयोग पुग्ने बताउँदै उनले भने, ‘पर्यटकलाई सुविधा पु¥याउने यस्ता कार्यलाई हामी प्रोत्साहन गर्छौं।’
साझा तीर्थस्थल पाथीभरा
पाथीभरा मन्दिर विशेषतः हिन्दू धर्मावलम्बीको तीर्थस्थल भनेर चिनिए पनि यहाँ दर्शनका लागि हिन्दू, बौद्ध, किराँत र अन्य धर्ममा आस्थावान् पनि पुग्ने गरेका छन्।
अन्नले भरिएको पाथीजस्तै देखिने पहाडको टुप्पोमा देवी उत्पत्ति भएकाले पाथीभरा भनिएको जनविश्वास छ। ताप्लेजुङ जिल्लाको सदरमुकाम फुङलिङबाट १९.४ किलोमिटर पूर्वोत्तरमा पर्ने पाथीभरा समुद्र सतहदेखि ३ हजार ७ सय ९४ मिटरको उचाइमा छ।
किंवदन्तीअनुसार परापूर्वकालमा गोठालाहरूले पाथीभरामा भेडीगोठ राख्थे। एक दिन अचानक भेडाका बथान हेर्दाहेर्दै अलप भए। त्यही बेला गोठालाहरूले देवीको दर्शन पाए। उनीहरूले एउटा भेडा ल्याएर बलि दिएपछि हराएका भेडा पहिलाकै ठाउँमा भेटिए। त्यसपछि देवीको पूजा अर्चना गर्दै बलि दिने चलन सुरु भएको मानिन्छ।
बलि नदिनेले फलफूल चढाउने गरेका छन्। भक्तजनले देवीलाई सिन्दूर, टीका, गाजल, काइँयो आदि चढाउने गर्छन्। यहाँ वर्र्षैभरि नेपालका विभिन्न ठाउँसँगै भारतबाट समेत दर्शनार्थी आउने गरेका छन्। लिम्बू समुदायले पाथीभरा देवीलाई शक्तिकी स्रोत अर्थात् ‘मुक्तुवुङ’ मानेर पूजा गर्ने गरेका छन्।
पूर्वका विभिन्न जिल्लामा पाथीभरा मन्दिर बनाएर दर्शन पूजा गर्ने गरिएको छ। त्यसैले ताप्लेजुङको मुख्य पाथीभरालाई ठूलो पाथीभरा र अन्यत्र बनेका पाथीभरालाई सानो पाथीभरा भन्ने गरिन्छ।
ताप्लेजुङको पाथीभरा पुग्न टाढा पर्ने र अप्ठ्यारो बाटो पार गर्नुपर्ने भएकाले त्यहाँ पुग्न नसक्नेका लागि भनेर इलाम, सुनसरीको धरान, भेडेटार, तेह्रथुमलगायत जिल्लामा पाथीभरा मन्दिर स्थापना गरिएका छन्। ती मन्दिरमा समेत स्थानीय दर्शनार्थीको भीड लाग्ने गरेको छ।
पाथीभराको प्राकृतिक सौन्दर्य
पाथीभराको धार्मिक महŒवले मात्र होइन प्राकृतिक सौन्दर्यले पनि पर्यटकलाई लोभ्याउँछ। लस्करै देखिने कञ्चनजंघा, कुम्भकर्ण, मकालु, लोत्से, नोत्सेलगायत हिमालका रमणीय दृश्यले पर्यटकलाई लोभ्याउँछ। त्यसमाथि गुराँसको जंगल, धुपी, सल्लाका बोट, मालिङोघारी निकै रमणीय लाग्छन्।
ताप्लेजुङ, सदरमुकाम फुङलिङबाट उकालो लागेपछि रमाइला दृश्य अवलोकन गर्दै पाथीभरा पुगिन्छ। पाथीभराबाट सूर्योदय र सूर्यास्तको दृश्य पनि उत्तिकै रमाइलो देखिन्छ। दर्शनार्थी यस्ता रमाइला दृश्य क्यामरा र मोबाइलमा कैद गर्दै पाथीभरा पुग्छन्।
मन्दिरमा हरेक वर्ष लाखौँ दर्शनार्थी पुग्ने गर्छन्। उनीहरूले मन्दिरमा चढाएको भेटी नै करोड रुपैयाँभन्दा बढी हुन्छ। गत वर्ष मन्दिरमा चढाइएका करिब ४० क्विन्टल सिक्का मन्दिरले राष्ट्रबैंक सँग साट्ने व्यवस्था मिलाएको थियो।
कसरी पुग्ने पाथीभरा ?
हेलिकप्टरबाट पाथीभरा दर्शन गर्न जानेहरू हाल भेडेटार पुगेर त्यहाँबाट सीधै आधा घण्टामा पाथीभरा उड्ने गरेका छन्। तर, हेलिकप्टरयात्रा बेला–बेला मात्र हुन्छ नियमित हुँदैन।
धेरैजसो दर्शनार्थी स्थलमार्गबाटै पाथीभरा जान्छन्। त्यसका लागि विभिन्न बाटा छन्। इटहरीबाट झापा, इलाम, पाँचथर हुँदै ताप्लेजुङ सदरमुकाम फुङलिङबाट अलि माथि तल्लोफेदीसम्म एक दिन गाडीमा यात्रा गर्न सकिन्छ। त्यसपछि पैदल हिँडेर पाथीभरा पुगी पुनः फेदीमा फर्किन सकिन्छ। मेची राजमार्गको बिर्तामोडबाट फुङलिङसम्म २ सय ७० किलोमिटर पर्छ।
कतिपय यात्रु पैदलयात्रा गर्दै पाथीभरा जान रुचाउँछन्। उनीहरू धरानबाट धनकुटा, तेह्रथुमको वसन्तपुर हुँदै संखुवासभाको गुफापोखरीसम्म गाडीमा र त्यसपछि गोर्गा दोभान हुँदै एक दिनजति हिँडेर पाथीभरा पुग्ने गर्छन्।
हवाईजहाजमा जान चाहनेका लागि हप्ताको एक दिन विराटनगरबाट ताप्लेजुङको सुकेटारसम्म उडान हुन्छ। त्यहाँबाट भने आधा दिनजति उकालो हिँड्नै पर्छ पाथीभरा पुग्न।
समुद्र सतहदेखि ३ हजार ७ सय ९४ मिटरको उचाइमा रहेको पाथीभरा मन्दिर क्षेत्रको तापक्रम शून्यको हाराहारी हुन्छ। यहाँ पर्यटकलाई लेक लाग्ने सम्भावना रहने हुँदा यात्री तातोपानी, भुटेको मकै, अदुवा, लसुन, र न्यानो कपडा लिएर जाने गर्छन्। यात्रीका लागि मन्दिर व्यवस्थापन समितिले विश्रामस्थल, कम्बल र खानेपानी को व्यवस्था गरिदिन्छ।